Buy Mi6(380,000Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
Mi 6. 18K Gold ရွှေပါသောဖုန်းလေး...Ram6128GB...
အလုံးအသစ် နီး နီးသန့်...သုံးလို့ကောင်းသောဖုန်းလေး...
Global Version အလုံးလေးပါ။
Google Playstore အဆင်ပြေပြေအကုန်သုံးလို့ရပါသည်။
Error လုံး ဝ မရှိပါ ခင်ဗျာ။
Price...380000Ks... Mi Note3Ram664GB Blue Crazy Colour ရှားပါးလေး...
ဘူး ပစ္စည်း အစုံ ပါမည်။
အလုံးအသစ် နီး နီးသန့်....အသစ်ဝယ်ဖို့ ရှားသော
Error လုံး ဝမရှိပါ ခင် ဗျာ။
Price...325000Ks... Mi Note5Ram 6GB 64GB အလုံးလေးပါ။
Original Charger ပါမည်။
Error လုံးဝမရှိပါ ခင်ဗျာ။
📲09-799999-160 ဖုန်းများအားလုံး Error တာဝန်ယူရောင်းချပေးပါတယ်။
Error ရှိ ခဲ့ပါ က ငွေအပြည့် ပြန်အမ်းပေးပါမည်။
အမည်: Mi 6